स्वास्थ्यमा मोटोपनबाट होइन, यस्ता कुराबाट सचेत रहनुस | Rajmarga
स्वास्थ्यमा मोटोपनबाट होइन, यस्ता कुराबाट सचेत रहनुस
सबै स्वास्थ्य रिपोर्टहरु यो निष्कर्षमा टुंगिएको छ कि मोटोपन विश्वव्यापी समस्या हो । मोटोपनका विषयमा संसारभर यो ठुलो चिन्ताको विषय हो भन्ने चर्चा छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २०१४ को रिपोर्टअनुसार संसारमा ६०० मिलियन अर्थात ६० करोड बढी मानिस मोटोपनको शिकार बनेका छन् ।
यस आधारमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले भन्ने गरेको छ कि यो कुनै समस्या होइन । यसको सामना गर्न सहज छ र यसको हल उनीहरुसँगै छ।
प्रोफेसर ट्रेसीको दावी अनुसार कुनै पनि चिकित्सक वा अध्ययनकर्तालाई यो विवादास्पद लाग्न सक्छ कि उ उनीहरुको दावीसँग असहमत छ ।
ट्रेसी मुख्यतः सामाजिक तथा हेल्थ साइकोलजीकी प्रोफेसर हुन् । उनी भन्छिन्–जब म डाक्टरलाई भन्छु कि मोटोपन कुनै विश्वव्यापी समस्या होइन, तब उनीहरु रिसाउने गर्दछन् ।तर, उनीहरु यो कुरा पनि मान्छन् कि मोटोपनका कारण कोही पनि मर्नेवाला छैन ।
ट्रेसी भन्छिन् कि जो मोटो छ उनीहरुको जीवनकाल कुनै पनि प्रकारले दुब्लो मानिसको तुलनामा कम छैन । जबकि अधिकांश दुब्ला मानिस सधै कयौ प्रकारका रोगको शिकार हुने खतरामा रहन्छन्।
ट्रेसी यसलाई जरुरी ठान्छिन् कि अत्यधिक मोटोपनको शिकार मानिस केही रोगको खतरामा आउँछन् । तर, समान्य मोटोपनले त्यस्तै कुनै पनि खतरा उत्पन्न गराउँदैन ।
फेरि मोटोपनको समस्याका विषयमा यति धेरै चर्चा किन छ ? यसको जवाफमा ट्रेसी भन्छिन्–यसका कायौ कारण छन्, मोटोपन प्राणघातक त्यतिबेला हुन्छ, जब मानिस सुस्त हुन्छ र दिनभर बसिरहन्छ । उसको आम्दनी कम हुन्छ र उ स्ट्रेसमा रहन्छ । साथै कुनै पनि सानो रोगको उपचार गराउन असमर्थ हुन्छ ।
ट्रेसी भन्छिन्,–यो कुरामा कुनै शंका छैन कि मुटुसँग सम्बन्धित रोग र मधुमेह दुवै मोटो मानिसलाई हुने खतरा रहन्छ । तर, यदि उ व्यायम गरोस् आफ्नो शरीरलाई फंक्सनमा ल्याउँछ भने मोटोपन कम नभए पनि उ फिट रहन सक्छ ।
ट्रेसी भन्छिन् कि स्केलमा अन्तर देखिनका लागि व्यायम गर्नु ठिक होइन । आवश्यक छ व्यायम गर्नु । दिनमा करिब एक घण्टा । यसपछि तौल कम नभए पनि चिन्ता नगरे हुन्छ ।
यद्यपि ट्रेसीले मोटोपनको शिकार भएकाहरुलाई वजन मापनभन्दा बढी ब्लड प्रेसर चेक गर्न सुझाव दिन्छिन् । यसबाट आफूलाई आफ्नो स्वास्थ्यका बारेमा बढी जानकारी प्राप्त हुने उनको भनाइ छ। एजेन्सी
Previous post: उमेर ४० कटेपछिको सेक्स, स्वास्थ्य र सुन्तरताका लागि झनै विशेष
Next post: कामना फिल्म अवार्ड पुस २२ मा
क्यान्सर, मिर्गौला रोगी र मेरुदण्डका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार
कोरोना संक्रमणबाट १४ जनाको मृत्यु, १२७१ सङ्क्रमित
काेराेना संक्रमणबाट ३३ जनाकाे मृत्युु, २२१२ जनामा संक्रमण देखियाे
मुलुकभर ‘निषेधको आदेश’मा थप कडाइ गरिँदै
काेराेना संक्रमणबाट ३७ जनाकाे मृत्युु, थप ३९३८ जना संक्रमित
विकलांगता पीडित महिलाहरुको यौन आवश्यकता पूरा नभए यसरी हुन्छ हानिकारक
अल्सर बिग्रिए घातक हुनसक्छ, थाहा पाइराख्नुस अल्सरका सात लक्षण, बच्ने उपायसहित
पोलेको मकै खानु फार्इदा कि बेफाईदा ? पढ्नुहोस् आश्चर्यमा पर्नु हुन्छ !
योगगुरु रामदेव के खान्छन् ?
ख्याल गर्नुस् ब्लड प्रेशर पीडितलाई हस्तमैथुन कति जोखिमयुक्त ?